बिज्ञान/प्रविधि - Page2of 31 - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and morewww.khabardabali.com | Page 2
August 19, Mon
साउन ५ गते, २०७६ - २०:५१
फेसएपमा १५ करोड भन्दा बढी युजरका तस्विर जम्मा, तपाईको डाटा यसकारण पर्न सक्छ खतरामा
पछिल्ला दिनहरुमा फेसएप नामको एप तीब्र गतिमा भाइरल भइरहेको छ । यो एन्ड्रोइडको प्ले स्टोर र एप्पलको एप स्टोर दुबैमा उपलब्ध छ । यो रसियन एप हो । यसको सुरक्षालाई लिएर सवाल उठ्न थालिसकेको छ । फेसएपले कुनै पनि व्यक्ति...
साउन ३ गते, २०७६ - १३:११
सावधान ! ‘फेसएप’ प्रयोग गर्नु खतरनाक छ
बिबिसी । अहिले सोसल मिडियामा एउटा एपको प्रयोग गरी आफुलाई बुढो देखाउने होडबाजी नै चलिरहेको छ । विश्वभर नै फेस एपले तहल्का मच्चाइरहेको छ । सोसल मिडियामा फेसएपका तस्वीर अन्धाधुन्ध पोष्ट भैरहेका छन् । यो एपले कुनैपनि...
साउन २ गते, २०७६ - १३:२६
फेसएपमाथि कत्तिको विश्वास गर्न सकिन्छ ?
अनुहारको तस्बिर सम्पादन गरेर साबिकको भन्दा युवा वा वृद्ध अवस्था देखाइदिने एप फेसएपबारे अहिले सबैतिर चर्चा भइरहेको छ। उक्त एप प्रयोग गरेर प्राप्त परिणाम हजारौँ मानिसले सामाजिक सञ्जालमार्फत्‌ सार्वजनिक गरिरहेका...
असार ३१ गते, २०७६ - १२:१५
टेलिकमको ‘फाइवर टु दि होम’ सेवा शुभारम्भ
बागलुङ । नेपाल टेलिकम बागलुङले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय तथा द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्णतः फाइवर तारयुक्त बनाएको छ । बागलुङ बजारमा नमूनाको रुपमा कपर (तामाको तार)को प्रयोग हटाई पूर्णतः फाइवर...
असार ३० गते, २०७६ - २०:२३
बढि फलाेवर्स भएका नेता अब ट्वीटरकाे निशानामा, किन ?
माइक्रो ब्लगिंग साइट ट्विटरकाे निशानामा अब नेताहरू पर्ने भएका छन् । बढि फलाेवर्स भएका त्यस्ता नेताहरू ट्वीटरकाे निशानामा पर्ने भएका हुन् । त्यतिमात्र हाेइन आपत्तिजनक र जनता भड्काउने खालका भाषण गर्ने त्यस्ता...
असार २७ गते, २०७६ - २०:४५
कसरी चल्ला त हावाबाट माेटरसाइकल ?
एजेन्सी । भारत लखनउका एक वैज्ञानिकले एअर बाइकको आविष्कार गरेका छन् । उनले करिब ९ वर्ष पहिला एउटा एअर इन्जनको आविष्कार गरेका थिए । जुन अहिले आएर एअर बाइकको रुप लिएको छ । यो आविष्कारले बढ्दो ग्लोबल वार्मिङ समस्यासँगै...
असार २३ गते, २०७६ - १५:०३
एल.जि. ब्राण्डको टिभी सबैभन्दा विश्वासिलो
काठमाडौं । एल.जि. ब्राण्डको टेलिभिजन भारतको सबैभन्दा विश्वासिलो ब्राण्डमा परेको छ । द ब्राण्ड ट्रस्ट रिपोर्ट २०१९ अनुसार एल.जि. ब्राण्डको टेलिभिजन सबैभन्दा विश्वासिलो ब्राण्डमा परेको हो । धेरै उपभोक्ताहरुको...
असार १८ गते, २०७६ - ११:०९
तस्बिरबाट महिलाको वस्त्र हटाउन मिल्ने एप बन्द
एजेन्सी । तस्बिरबाट महिलाहरूको वस्त्र हटाएर नक्कली तस्बिर बनाउन मिल्ने दाबी गरिएको एउटा एपलाई त्यसका निर्माताहरूले बन्द गरेका छन्। पचास अमेरिकी डलर मूल्य राखिएको डीपन्यूड एपमाथि मदरबोर्ड नामको वेबसाइटमा लेख...
असार १७ गते, २०७६ - १२:१२
अपराधीले झुट बाेल्छ ? अब अपराधीको अनुहार नै स्क्यान गरेर साचो वा झुट बोलेको पत्ता लाग्ने
काठमाडौं । सामान्य सोधपुछमा अपराधीले साचो बोल्छन् वा बोल्दैनन् अब अनुहार हेरेरै पत्ता लाग्ने भएको छ। लन्डनको स्टार्टअप फेससफ्टले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स सिस्टम’ तयार पारेको छ। जुन सिस्टमले अपराधीको अनुहार...
असार १६ गते, २०७६ - १७:५१
कर्णाली प्रदेशमा पनि सुरु भयो टेलिकमको एफटिटिएच सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त एफटिटिएच सेवा कर्णाली प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशका संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई...